Ukubuyekezwa kwe-Play24Bet Casino - 350% kuya ku-ZAR 89,000 + 50 spins
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-play24bet casino
Isibuyekezo se-Play24Bet Casino
Isofthiwe:Tom Horn Gaming, Betsoft
Ibhonasi Lokukwamukela:400% Ibhonasi Yomdlalo
I-Play24Bet Casino ibonisa wonke umbala nobukhazikhazi bekhasino yezitini nodaka. Igama lingazwakala lingajwayelekile kepha liyisizathu kuhlala kumatasa amahora angu-24 kupulatifomu yayo, ngenxa yamalungu ayo amazwe aphesheya. Isungulwe ngo-2017 njengekhasino ye-inthanethi yamasevisi aphelele, i-Play24Bet Casino inikeza ilabhulali yemidlalo enkhulu ehlanganisa zonke izigaba ezithandwayo ezinjengama-slot, imidlalo yasetafuleni, i-poker yevidiyo, ikhasino ebukhoma, imidlalo edijithali, nemidlalo yasolwandle, ngaphandle kwama-progressive omhlaba wonke nawakuleli kanye nama-jackpot ahleliwe.
Iphaneli lewebhusayithi ligcwele imidlalo eyehlukile, izinto zekhasino, nezaziso futhi konke kuhlangane kudala umuzwa ofanele. Lonke ikhasi lasekhaya ligcwele imigqa phezu kwemigqa yezithonjana zomdlalo ngaphambi kokufika kubalazwe lesayithi yonke elineminingwane yokuphatha neyezomthetho. Ungabala abahlinzeki bemidlalo abangu-44 ekhasino, aholwa yizinkampane ezaziwayo ezinjenge-BetSoft, i-Spinomenal, i-Tom Horn, i-Booming Games, ne-Wazdan, njll. Kunezinkampane eziningi ezingaziwa kakhulu ezinemidlalo abadlali abaningi abangakaze bahlangane nayo ngaphambilini.
I-Play24Bet Casino ikuqala ngephakheji yokukwamukela ekhangayo bese iyilandele ngochungechunge lwamaphromoshini ajwayelekile. Ibuye ibe nohlelo lwabadlali abathembekile oluneKilabhu ye-VIP. Ukulingana kwemiphumela yemidlalo kuyanakekelwa ngokuhlolwa njalo kwe-Random Number Generator (RNG). Ukuhwebelana kwezezimali kugcinwa kuvikelekile ngobuchwepheshe be-SSL obujwayelekile emboni. I-Play24Bet Casino ingaba yindlela elungile yabadlali abavela eNingizimu Afrika. Uma ungena ngemvume eNingizimu Afrika uzothola amanani ebhonasi nge-SA Rand yize okwamanje ikhasino ayisekeli amaRandi kuphela. I-ZAR yakho izoguqulwa ngentengo yemakethe ekhona.
2021 Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Play24Bet Casino
Idiphozithi Yokuqala Idiphozithi elinganayo ka-350% efinyelela ku-ZAR 89,000 kanye nama-spin amahhala angu-50
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho e-Play24Bet Casino
I-Play24BetCasino ayinikeli ngebhonasi yediphozithi engekho okwamanje. Uma kukhona okusha maqondana nalokhu kuzobuyekezwa kulesi sigaba.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Play24Bet Casino
Everyday Bonus Ibhonasi yediphozithi elinganayo yansuku zonke enama-spin amahhala noma ukheshi obuyiselwayo
Lucky Lucky Jackpots Faka idiphozithi elingana no-ZAR 350 bese uthola idiphozithi elinganayo ka-350% ukuze udlale ama-progressive nsuku zonke.
Reload Bonus plus Free Spins Idiphozithi elinganayo ka-200% efinyelela ku-ZAR 50 kanye nama-spin amahhala angu-30 okudlala i-Tigers Claw
Refer-a-Friend Refer-a-Friend Letha abangane bakho bese uthola i-ZAR 350 ngomngane ngamunye omlethayo
Loyalty Program and VIP Club Qoqa amaphoyinti okuthembeka ngawo wonke amadiphozithi ukuze uwashintshisele imiklomelo futhi ukhushulelwe emazingeni aphezulu e-VIP Club uthole amalungelo akhulayo
Wonke amabhonasi aza neminbandela nemigomo awo, eyizibopho ezahlukahlukene zokubheja kanye neminye imibandela efana nemikhawulo yokubheja nokukhipha imali. Sicela uzijwayeze nemibandela yebhonasi ngayinye ngaphambi kokufaka isicelo sokukhipha imali ukugwema ukungaqondi nokudumazeka.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Play24Bet Casino
Izinkinobho ze ‘Login’ ne-‘Register’ zifakwe phezulu kupulatifomu kwesokudla. Chofoza ‘Log In’ bese ufaka imininingwane yakho, oyikhethe ngesikhathi uvula i-akhawunti yakho. Uma ungakabhalisi okwamanje, chofoza ‘Register’ bese uvula i-akhawunti yakho ngezinyathelo ezimbalwa ezilula.
Uzonikezwa ifomu okumele uyigcwalise ngemininingwane yakho, khetha i-ID yakho yokungena, iphasiwedi, nemali oyikhethayo. Kuzodingeka futhi ukuthi uthikishe amabhokisi ukwamukela imiyalezo ye-SMS, amaphromoshini nge-imeyili, futhi uqinisekise ukuthi uneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala nokuthi funde bese wamukela Inqubomgomo Yemfihlo, Nemigomo Nemibandela yekhasino.
Kuhlala kungcono ukuyifunda ngaphambili kokuvula i-akhawunti. Futhi uma usuchofoze inkinobho ewolintshi enkulu ‘Register’, usukulungele ukwenza idiphozithi yakho yokuqala futhi uthole iphakheji yakho yokukwamukela.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Play24Bet Casino
I-BetSoft ingumhlinzeki womdlalo owaziwa kakhulu e-Play24Bet Casino, ukuze ukwazi ukudlala amanye wama-slot evidiyo ye-3D amahle kakhulu. Abanye abahlinzeki abangabalingani abadumile, ngaphandle kwalaba ababalwe ngenhla yi-Habanero, i-Belatra, i-B Gaming, i-Green Jade, i-KA Gaming, i-Kalamba, ne-Mr. Slotty, wonke amagama abo agujwa ngenxa yezingqikithi zawo, izithombe, nezici ezilungele abadlali. Abanye abahlinzeki abasele baziwa kancane, kepha banganika abadlali isipiliyoni sokudlala esisha.
Ilabhulali yemidlalo eyinhloko itholakala ngaphansi kwephaneli enemibalabala futhi ihlukaniswe yaba yizigaba eziningi zemidlalo namagumbi emidlalo (lobbies) kunamanye amalabhulali. Ngaphandle kwemidlalo ye ‘Recommended’ neye ‘Favourites’, uzothola izigaba ezinjenge-slots, imidlalo yasetafuleni, ikhasino ebukhoma, ama-jackpot, i-poker yevidiyo, imidlalo edijithali, imidlalo yokudoba. Kubuye kube nendawo ehlukile yelotho yabahlinzeki abathize. Futhi ungafinyelela i-lobby ngayinye kusuka kumenyu ejwayelekile kuphaneli yewebhusayithi ngakwesobunxele.
Ungabona bonke abahlinzeki ngokuchofoza i-tab ewolintshi ethi ‘Providers’ ngezansi kwelabhulali yemidlalo kwesobunxele. I-lobby ngayinye nayo izokunikeza abahlinzeki bemidlalo yabo efakiwe, ukuze ukwazi ukuhlunga amageyimu uma ukhetha umhlinzeki oyedwa kunomunye. Kukhona nephaneli lokusesha lapho ungasesha khona imdlalo ethize. Okuthandeka kakhulu ngelabhulali wukuthi yonke imidlalo, ngaphandle kwemidlalo ebukhoma, ingadlalwa ngemodi yedemo. Isici esiwusizo kakhulu uma ubheka ukuthi imidlalo eminingi intsha kubadlali abaningi.
Dlala Ama-slot Inhliziyo Yakho Yaneliseke
I-lobby yama-slot iphinde ihlukaniswe phakathi ibe yi ‘All Slots’ ne ‘New Slots’, lapho abathanda imidlalo yakudala bangathola khona i-one-armed bandits. Kukhona futhi isigaba se ‘Video slots’ lapho ungabheka khona wonke ama-reels esimanje khona manjalo. Imidlalo evela ku ‘All Slots’ ibandakanya i-Four Divine Beasts, i-5 Mariachis, i-Rolling Roger, i-Scruffy Scallywags, i-Templar’s Quest, i-Dragon’s Throne, i-12 Zodiacs, ne-Roman Empir, ngaphandle kweminye.
Ihholo Elikhulu Elinamatafula Ayintandokazi Yakho
Izinguqulo ze-Blackjack zilawula yi-lobby yemidlalo yasetafuleni, kulandele i-roulette, i-poker, i-baccarat, neminye imidlalo futhi i-Play24Bet Casino ayihlukile. Sebenzisa amakhono akho ukudlala imidlalo efana ne-Blackjack Surrender, i-Blackjack VIP, i-American Roulette, i-Casino Roulette, i-Baccarat, i-Baccarat No Commission, i-Three Card Poker, i-Caribbean Poker, neminye imidlalo efana ne-Andar Bahar, ne-Teen Patti, njll.
Injabulo Yekhasino Yangempela
Ababaningi abadlali abangaba nesipiliyoni sekhasino yangempela kodwa kulapho-ke imidlalo yasekhasino ebukhoma esiza khona, ngokwakha isipiliyoni esifana nesekhasino engaphakathi kwesakhiwo enabadayisi abaphilayo, izinto zangempela, nabadlali ababphilayo. Iilobby iqukethe izinhlobo ezahlukahlukene ezibukhoma ze-blackjack, i-baccarat, i-poker ne-roulette, kepha futhi inemidlalo ebukhoma ye- Andar Bahar, Amadayisi, nemidlalo enengqikithi yemibukiso ye-TV efana ne-Wheel of Fortune, njll.
Ama-Progressives Akuleli nama-Jackpot Ahleliwe
I-Play24Bet Casino inama-progressive omhlaba ambalwa, iqoqo lama-progressive akuleli nama-jackpot ahleliwe. Zama inhlanhla yakho kuma-progressive acebile njenge-The Slotfather, i-Fruit Bat Crazy, and Ocean’s Call. Amanye ama-jackpots abandakanya i-Fenghuang, i-Fa Cai Shen, i-Indian Cash Catcher, i-Ride ‘Em Cowboy, i-Naughty Santa, i-Wizards Want War!, i-Hot Hot Fruit, i-88 Dragon’s Treasure, i-New Year Monkey Jackpot, njll.
I-Poker Yevidiyo Yakudala Nezinguqulo Ezintsha
Imidlalo ye-poker yevidiyo iyaheha futhi iza namathuba amancane okuthi ikhasino iwine. Ayidingi amakhono e-poker amangazayo. Zonke izinhlobo ngezesandla esisodwa ne-zandla eziningi (single and multi-hand ), ngokuya ngokutholakala. Dlala zonke izintandokazi zakho ezinjenge-Jacks or Better, i-Deuces Wild, i-American Poker, i-Aces and Faces, i-Aces & Eights, i-Double Bonus Poker, nezinye ezingavamile ukubonwa ezinjenge-Sequential Royale, ne-American Poker Gold, njll.
Ukubhejela ama-Pet Sport akho Ngemidlalo Edijithali
Imidlalo edijithali inganika abadlali injabulo nokuwina okufana nemidlalo yasekhasino ejwayelekile. E-Play24Bet, ungabhejela imidlalo efana ne-Cricket Roulette, i-Greyhound Races, i-Virtual Horse Races, i-Slot Car Races, i-Virtual Derby, i-Football League, i-Table Tennis, Golf, i-Baseball Fever, ne-Cock Fighter, njll.
Thola Isigaba Esisha Sekhasino Ekwenzeni
Imidlalo yokudoba iyimidlalo elula noma esheshayo yohlobo oluhlukile ngokuphelele. Ihlanganisa injabulo yokudlala amageyimu evidiyo nethuba lokuwina imali yangempela. Ibizwa nge ‘Fishing Games’ ngoba iningi lale midlalo inengqikithi yangaphansi kwamanzi njenge-Blue Ocean, i-Fishing Expedition, i-KA Fish Hunter, i-Fishing God, ne-Fishing War, njll. Ezinye izingqikithi ezinjengokulwa emoyeni, nokuhlolwa kwehlathi nazo ziyasebenza.
Play24Bet Mobile Casino: I-Play24Bet Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
Iyafana ncamashi. Amakhasino eselula amaningi ayizinguqulo ezincanyana zenguqulo ye-PC ezinoshintsho oluncane ukwamukela isikrini esincane. Kodwa-ke, inguqulo ye-PC ye-Play24Bet Casino nayo uqobo yakhelwe ukusebenza kahle kusikrini seselula. Ngakho-ke, awukho umehluko ekuhlelweni kwekhasino yeselula neyepulatifomu ye-PC. Umehluko owodwa okhona wukuthi, ilabhulali yemidlalo iseshwa ngokuya eceleni ukuthola wonke ama-lobby.
I-Play24Bet Casino ingatholakala cishe kuwo wonke amadivayisi eselula, abandakanya ama-Smartphone, ama-tablet, nemikhiqizo ye-Mac esebenzisa i-Android, i-iOS, i-Windows Phone, ne-Blackberry, njll. Konke okudingayo wukuxhumana kwe-inthanethi okuzinzile ngaso sonke isikhathi ngoba uzobe udlala ku-inthanethi.
Imidlalo yeselula yakhiwe ngekhodi ye-HTML5, edala ukubukeka komdlalo, ehlela kabusha ipulatifomu yomdlalo kusikrini esincane, ekuvumela ukuba udlale imidlalo enemisindo nezithombe ezisezingeni eliphezulu. Jabulela ukudlala uhamba ngemidlalo enjenge-Sizzling 777, i-Mermaid’s Bay, i-The Tomb: Dragon Emperor’s Treasure, i-American Blackjack, i-HD Roulette, i-Russian Poker, i-Baccarat Supreme, i-Virtual Horse Racing roulette 2, negeyimu yevidiyo i-Romance of the Three Kingdoms, neminye.
Ngingayidawuniloda Yini i-Play24Bet Casino Kuselula Yami?
Izinsuku zamakhasino adawunilodekayo angaxhunyiwe ku-inthanethi zidlulile. Kube nezinkinga eziningi kakhulu ngesitoreji nangejubane. Manje, abadlali sebekhetha ukudlala ku-inthanethi futhi amakhasino anamuhla ayekile ukunikela ngama-apps e-PC noma eselula.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Nokudiphozitha Imali e-Play24Bet Casino
Visa Yebo Izinsuku 1-3 Yebo
MasterCard Yebo Izinsuku 1-3 Yebo
Neosurf Yebo Izinsuku 2-4 Yebo
Interac E-Transfer Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
EcoVoucher Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Flexepin Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Paykasa Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Paysafecard Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Qiwi Wallet Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Oto Pay Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Bitcoin Yebo Ngokusheshayo Yebo
Bitcoin Cash Yebo Ngokusheshayo Yebo
Bank/Wire Transfer Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Inkampane ye-Play24Bet Casino Nemininingwane Yokuxhumana
Umphathi ngu: PlayB I-imeyili: [email protected]
Inguqulo Yeselula: Yebo Usizo lwe-24/7 356: Cha
Ubuhle Nobubi be-Play24Bet Casino
Ilabhulali yemidlalo enkulu Ambalwa ama-progressive omhlaba wonke
Iphakheji yokukwamukela ehehayo Alukho usizo lwamakhasimende ngocingo
Imidlalo eminingi emisha
Imidlalo yasekhasino ebukhoma
Ezemidlalo ezidijithali namageyimu evidiyo
Uhlelo lwabadlali abathembekile Nekilabhu ye-VIP
Yini Eyenza Ukuthi I-Play24Bet Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
Ilabhulali yemidlalo enkulu
Imidlalo eminingi emisha evela kubahlinzeki bemidlalo abaziwa kancane
Iphakheji yokukwamukela ehehayo
Uhlelo lwemiklomelo Nekilabhu ye-VIP
Izikhalo nge-Play24Bet Casino Ningizimu Afrika
Ayikho inguqulo yaseNingizimu Afrika yewebhusayithi
Awekho amanani ebhonasi nge-ZAR
Awekho ama-progressive omhlaba wonke
Ingabe i-Play24Bet Casino Legal Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho yaseNingizimu Afrika ayiwavumeli amakhasino e-inthanethi ukuthi anikele ngamasevisi awo kubahlali bezwe. Kodwa-ke, uhulumeni akanamandla okuphatha amakhasino aphesheya kwezilwandle, futhi akahlaseli izakhamuzi uma zidlala kuwo.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Play24Bet Casino?
Chofoza ‘Withdrawal ‘ekhasini le-akhawunti yakho, khetha indlela yakho yokukhokha bese ufaka inani ofuna ukulikhipha. Uzohanjiswa ekhasini lomhlinzeki wesevisi yokukhokha wakho lapho kuzodingeka ufake imininingwane yakho yasebhange bese uyithumela. Izindlela ezahlukahlukene zokukhokha zinezikhathi zokucubungula ezihlukile njengokubhaliwe ngenhla. Vele uqiniseke ukuthi unebhalansi futhi awunazidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali. Ungacelwa ubufakazi bokuzazisa kanye nekheli ngokwenqubo ye-KYN, ngakho-ke uyigcine eduze kwakho.
Yini i-Play24Bet Casino?
I-Play24Bet Casino iyikhasino ye-inthanethi lapho amalungu adlala khona imidlalo ngemali yangempela. Ikhasino inelayisense evela kuHulumeni waseCuracao, obeka imithetho eqinile yokudlala okulungile, okusobala, nokunomkhawulo, elandelwa yi-Play24Bet.
Ngubani umnikazi we-SPlay24Bet Casino?
Play24Bet iphethwe futhi ngeye-PlayB, inkampane ebhaliswe ngaphansi kwemithetho yase-Kaya Virola Z/N, Curacao.
Ingabe i-Play24Bet Casino nezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Cha, i-Play24Bet Casino ayinayo i-sportsbook ebukhoma. Esikhundleni salokho inikeza imidlalo edijithali, lapho abathandi bezemidlalo bengabhejela imidlalo edijithali.
Ingabe i-Play24 Casino Inikela Ngohlelo lwe-VIP?
I-Play24Bet Casino inikela ngohlelo lwabadlali abathembekile futhi inekilabhu ye-VIP Club ekhethekile
Ziyini Izidingo Zokubheja Ukuze Ukhiphe Imali e-Play24Bet Casino?
Wonke amabhonasi alinganayo kanye namadiphozithi e-Play24Bet Casino kumele abhejwe izikhathi ezingu-40 ngaphambi kokuthi ukwazi ukukhipha imali oyiwinile ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela. Ama-spin amahhala namanye amabhonasi angaba nokudlala okuhlukile. Kuhlale kungcono ukuzijwayeza ukufunda imigomo ngaphambi kokuthatha ibhonasi.